श्वास परीक्षणबाट क्यान्सर पहिचान | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि श्वास परीक्षणबाट क्यान्सर पहिचान
on: २४ पुष २०७५, मंगलवार १८:५९ र यो पनि, स्वास्थ्य र जीवनशैली
परीक्षणले कसरी काम गर्छ ?
शरीरका कोषहरुमा ‘बायोकेमिकल’ प्रतिक्रिया भइरहँदा श्वासमा भोलाटाइल अर्गानिक कम्पाउन्ड (भीओसी) नामक अणुहरु भेटिन्छ । तर शरीरको कुनै हिस्सामा क्यान्सर वा अन्य कुनै रोग लागेको छ भने कोषहरुको सामान्य व्यवहार फेरिन्छ । यिनीहरुले फरक खालको अणुहरु निकाल्छ । यसको गन्ध पनि एकदम फरक खालको हुन्छ ।
परीक्षणमा को–को सहभागी हुन सक्छन् ?
यो क्लिनिकल परीक्षण शुरुमा अन्न नली (ओसोफेगस) र आमाशय (पेट)को क्यान्सर संदिग्ध बिरामीमा मात्रै गरिनेछ । भविष्यमा भने यसमा प्रोस्टेट, मृगौला, मूत्राशय, कलेजो र प्यन्क्रियाज क्यान्सरका बिरामीलाई मात्रै होइन स्वस्थ मानिसलाई पनि सहभागी गराइनेछ । परीक्षण अहिले सानो समूहमा मात्रै गर्न लागिएको छ । यसबाट आउने नतिजाको सामान्यीकरण गर्न, गलत वा झुठो नतिजा आउने अवस्था टार्न भने मानिसको ठूलो जमातमा पनि यो परीक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा